Home MoHS Organization Objectives and Strategies Policies National Health Policy (English version) National Health Policy (Myanmar version) Health Policy Mapping (2014) National Population Policy (Draft) Plans Health Development Plans National Health Plan (2017-2021) Executive Summary (Eng) Executive Summary (MM) NHP (2017-2021) (Eng) NHP (2017-2021) (MM) Highlights from AOP (2017-2018) National Health Plan (2011-2016) NHP (2011-2016) (Eng) NHP (2011-2016) (MM) NCDP (2011-12 to 2030-31) NCDP (2011-12 to 2030-31) Summary (Eng) NCDP (2011-12 to 2030-31) Summary (MM) Myanmar Health Vision 2030 Strategic Plans Laws and Legislations Minister's Speeches 2016 2017 Messages Departments Department of Public Health Department of Medical Services Department of Human Resources for Health Department of Medical Research Department of Traditional Medicine Department of Food and Drug Administration Department of Sports and Physical Education Information Repository Publications & Reports All Publications MDHS (2015-16) Health Statistics Annual Hospital Statistics Annual Public Health Statistics Myanmar Health Atlas 2010 National Health Account Health In Myanmar SOPs and Guidelines Presentations News & Announcements News Announcements Scholarships/Trainings MoHS Newsletters Health Messages Heat-related Illness Child Health Maternal and Reproductive Health Adolescent Health Comments & Suggestions သူနာပြု/သားဖွားကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သူနာပြုသားဖွား ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန် ပေးအပ်ထားသည့်အဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်နှင့်အသိပေး တိုင်ကြားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၃-၁၂-၂၀၁၆) ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥက္ကဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ၊ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဟန်ချက်ညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် ဆေးရုံများအားကြည့်ရှစစ်ဆေး တိုင်းရင်းဆေးဝါးများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ Index - N
Newsletter (Vol. 2, No. 1) Highlight from AOP (2017-2018) National Health Plan (2017-2021) (MM) National Health Plan (2017-2021) (Eng) National Health Plan (2017-2021) Executive Summary (MM) National Guidelines for Human Rabies Prophylaxis (2015) Newsletter (Vol. 1, No. 3) National Strategy for WASH (2016-2030) Final Draft National Strategic Plan for Tuberculosis (2016-2020) National Strategic Plan for Dengue Prevention and Control (2016-2021) National List of Essential Medicines 2016 National Health Account 2012-2013 National Health Account 2008-2009 National Health Account 2006-2007 National Health Account 2002-2005 National Health Account 1998-2001 Newsletter (Vol. 1, No. 2) Newsletter (Vol. 1, No. 1) CONTACT US